Cell Phone Ingxoxo mibhalo Lokusebenza
If your target device is an iPhone or Android and you want to be able to listen to their device surroundings from the safety of your ExactSpy online account then you need to record the surroundings using ExactSpy-Cell Phone Conversation Recorder App kuma ukuqoshwa sici.
– Ukurekhoda indawo idivayisi ngaphandle kokudinga idivayisi UKUQONDISA emzimbeni
– Gcina ukuqopha kukhompyutha yakho lula ukuwabona
– Uzigcine ufihlekile ngaso sonke isikhathi
– Cacisa isikhathi ukuqopha ukuze ivumelane wena kanye isimiso sakho
– Record kusuka 5 amaminithi up to 1 ihora ngesikhathi
Lalela futhi aqophe esikuyo yethebhulethi kwikhompyutha yakho noma nini. Just Chofoza Qala inkinobho on control panel yakho (my.exactspy.com) futhi uyokwazi ukulalela okwenzekayo azungeze idivayisi yakho ngokushesha. Zonke okulalelwayo kuyokwenziwa kwi-ifayela MP3 ukuvumela okulanda nabo muva nje.
Kungani You Need To ExactSpy-Cell Phone Conversation Recorder App
Ufuna ukuqopha indawo kodwa ufuna ukuhlala ezifihliwe. Wena futhi bamatasa phezu nokuqapha umuntu kangaka yini ongayenza ukuze uqiniseke ukuthi uhlale ezifihliwe kodwa ungaphuthelwa into?
It never used to be this easy but ExactSpy understands that people are busy and do not have time to monitor someone all the time but, okubaluleke, bafuna ukuhlala ezifihliwe futhi yilokho kwaholela kithi ekwakheni ExactSpy-Cell Phone Conversation Recorder App kuma ukuqoshwa sici.
Cell Phone Ingxoxo mibhalo Lokusebenza, How to record a cell phone conversation on android, How to record a cell phone conversation on iphone, How to record a cell phone conversation on iphone 5, How to record cell phone conversations free, How to record cell phone conversations samsung, Record cell phone calls iphone app, Record cell phone calls secretly free
← Hangouts Sms Free Spy Thwebula
→ Ithrekhi Cell Ucingo ukuphequlula umlando